Unyango lweMpilo yeFungus | Ngeentlanzi
Amayeza okuphilisa iintlanzi zamakhowa
Xa sinendawo ehlala emanzini enye yeengxaki zempilo ezihlala zichaphazela iintlanzi ngumngundo. Ezi fungi zihlala zihlasela iintlanzi ukuba ukuvalelwa kungakhange kwenziwe phambi kokungenisa abantu abatsha kwi-aquarium. Banokubonakala ngenxa yeempazamo ezithile kulondolozo kunye nolawulo lwe-aquarium. Ke ngoko, Amayeza okuphilisa iintlanzi zamakhowa zisisisombululo esisebenzayo. Ukuba ukhe wazibona naziphi na iimpawu zesifo kwiintlanzi ezinje ngamabala okanye imisonto emhlophe, kunokwenzeka ukuba sinesikhunta.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi ngamayeza anyange iintlanzi zokungunda.
1 Kutheni kuvela iifungi
2 Amayeza okuphilisa iintlanzi zamakhowa
3 Uthintelo lomngundo
Kutheni kuvela iifungi
Iifungi zidlala indima ebalulekileyo kuzo zonke izinto eziphilayo. Owona msebenzi uphambili kukondla into efileyo ye-aquarium. Le nto ifileyo inokuba yintsalela yokutya, ukungcola kunye nolunye ulusu oluvela entlanzini. Lo msebenzi ulungile ukuze ukwazi ukususa iintsalela zokungcola ngokwendalo. Nangona kunjalo, ukuba kukho ukwanda kwinani lezinto eziphilayo ngenxa yokungakhathali kukhathalelo lwe-aquarium, inani labantu lokungunda liya kunyuka.
Ukuba inani lokungunda liyanda, iintlanzi zethu zinokosulelwa. Nje ukuba ifungus ifikelele kwithishu yentlanzi iqala ukukhula ngokukhawuleza kwintsuku enye okanye ezimbini. Kulapho sinokubona khona iimpawu zokuqala ezibonakalayo. I-spores zefungus iyaqhubeka nokuzala kwindalo esingqongileyo ukuze isasaze kuyo yonke i-aquarium. Le yindlela ezinokuthi zichaphazele ngayo ezinye iintlanzi.
Sera omnipur S 50 ml -...
Phakathi kwezona ntlobo ziphambili zokungunda esizifumana kwintlanzi kwezi zilandelayo:
UGenus Saprolegnia kunye no-Achlya: zezona zixhaphakileyo kwiintlanzi zasemanzini. Ihlala isondla kwizinto ezifileyo eziphilayo, amaqanda kunye nokuziphazamisa ezinye iintlanzi ezibuthathaka. Uluhlu lweeCottony luyabonakala kumzimba wentlanzi osulelekileyo. Le yenye yeempawu eziphambili.
Branchiomyces: lolunye uhlobo lomngundo oluhlala luchaphazela iintlanzi. Ihlasela kakhulu iintlanzi zentlanzi kwaye nomonakalo abawenzayo ubaluleke kakhulu. Ngokuchaphazela ii-gill zibangela ityhefu ye-carbon dioxide. Oku kubangela ukusilela komzimba. Izinga lokufa liphezulu kakhulu.
Ichthyosporidium hoferi: Nangona ingaqhelekanga loo nto, iziphumo zayo zibuhlungu. Iintlanzi zinokubonakala zikhupha iintsholongwane ngeengqatha. Ngale ndlela, bangcolisa yonke i-aquarium kunye nezinye iintlanzi. Zidla ngokuchaphazela ikhaphethi kunye neecichlids ngaphezulu. Akukho lonyango lwaziwayo lokuphelisa.
Iintlanzi nokuba kungenxa yokungasebenzi kakuhle kwendalo yazo okanye ngenxa yokuba zihlaselwe ngumngundo kunokubenza baphulukane nempilo yabo. Kodwa akufuneki sibashiyele kwizixhobo zabo kuba kusoloko kukho iindlela zokunyanga ukungunda.
Olunye lolona nyango lusebenzayo lwefungus ziibhafu zetyuwa. Ityuwa, irhabaxa elingcono, kunye nokusetyenziselwa ukupheka ukunyanga ukungunda ngepesenti ephezulu yeziphumo ezilungileyo.
Ukuba siphawula ukuba iintlanzi zethu okanye uhlobo oluthile lunesifo sokungunda, sithatha isikhongozeli esikhulu kwaye songeze iitispuni ezimbini zetyuwa malunga neelitha ezimbini zamanzi, umlinganiso ofanelekileyo wetyuwa ngulo xa uthe wangcamlwa unencasa ye-saline engenamandla kangako, Emva koko sibambisa iintlanzi emnatheni size sizntywilisele ixeshana kwisitya esinetyuwa. Le bhafu yetyuwa kufuneka iphindaphindwe yonke imihla de sibone ukuba ifungi ilahlekile kwaye iintlanzi ziyadada ngaphandle kwengxaki.
Uhlaza lweMalachite lusetyenziselwa iimeko zokungunda. Isisombululo esiluhlaza esine-1 / 15.000, apho iintlanzi ziya kubekwa imizuzwana eli-10 ukuya kwengama-30. Ukuba ibhafu ayisebenzi, izakuphindwa rhoqo emva kweentsuku ezi-2 okanye ezi-3, ngaphandle kokulibala ukuba iqondo lobushushu lokuhlamba kufuneka lifane nelo le-aquarium.
Xa sijonga izinto ezingaqhelekanga okanye ukwakheka esikalini okanye amaphiko entlanzi, iyeza lokunyanga yi-hydrogen peroxide. Umyinge yi-175 cc kwilitha ezili-10 zamanzi. Iibhafu kufuneka zihlale imizuzu eyi-10-15.
Ngaphandle kwesodium chloride okanye ityuwa eqhelekileyo, kufuneka isetyenziswe njengesithintelo, ngakumbi kwii-aquariums eziqukethe i-mollienisias, kwinani lamasipuni ama-2 kwinqanaba le-4 yeelitha zamanzi, ezingonzakalisi izityalo okanye izilwanyana.
Olunye ulungiso olulungileyo lokunyanga iintlanzi zamakhowa kukuthintela. Ukuba ayenzeki, akuyi kubakho nyango. Emva koko siza kukubonisa iingcebiso ngokubanzi ukuze i-aquarium yethu ingosuleli njengefungus:
Kuya kufuneka sazi kakuhle zonke iimfuno zohlobo ngalunye lweentlobo esiza kuzazisa kwi-aquarium. Uhlobo ngalunye lweentlanzi luya kufuna uhlobo olwahlukileyo lokutya, izixhobo, amanzi, ubushushu, i-pH.
Zama ukuphatha i-aquarium ngononophelo ukunqanda ukwenzakala kunye noxinzelelo kwintlanzi.
Ngalo lonke ixesha usiya kuzisa umntu omtsha kuyathakazelisa ukuba badlule bodwa. Ukuvalelwa yedwa kufuneka idlulileyo malunga neeveki ezi-3-6 ukuqinisekisa ukuba awunako ukosulela abanye.
Kufuneka sinikeze iintlanzi ngoxolo lwengqondo kunye nendawo yokufihla abantu abafikayo. Ngale ndlela siza kubanceda bangabinastresi.
Kwi-aquarium eyahlulwe yodwa, kuya kufuneka ube neelitha zamanzi ezininzi ngentlanzi nganye kune-aquarium yokugqibela. Akufuneki iqulethe iilitha ezimbalwa zamanzi kunokuba ziyimfuneko.
Siya kuhlala sikuphepha ukusebenzisa ukutya okuphilayo okuvela kwindawo apho singenakho ulawulo oluthile. Ndiza kuhlala ndisithi sibona iziko elikhethekileyo apho sinokufumana khona ukutya okuphilayo ngokhuseleko olukhulu.
Asiyi kubeka iidipozithi ezimbini ezahlukeneyo kunxibelelwano.
Eyona nto ilungileyo kukususa isibulala-zintsholongwane kwi-aquariums ngokukrokra okuncinci kokuhlaselwa ngumngundo.
Kunika umdla ukubulala iintsholongwane kwizixhobo xa zisebenzisa thina.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi ngamayeza onyango eentlanzi zamakhowa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » Amayeza okuphilisa iintlanzi zamakhowa
Ndenze into ye-hydrogen peroxide ngentlanzi yam kwaye yafa> :(